वैद्यकहाँ पैसा पुगेपछि बल्ल चाल पाए बादलले विप्लवको माग ! - वैद्यकहाँ पैसा पुगेपछि बल्ल चाल पाए बादलले विप्लवको माग !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १७ आश्विन, 02:05:24 AM
काठमाडौं । भर्खरै विप्लव समुहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सरकारको पटके नियन्त्रणबाट मुक्त भई बाटो लागिसके । तर, तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ता अच्चम मान्दै छन्, आखिर किन रामबहादुर थापा बादल प्रकाण्डको पछि यति हात धोएर लागेका होलान ?
पार्टी एकीकरणको दौरान विभिन्न बैठक र छलफल चल्दा युवा र विद्यार्थीको हकमा जटिलता आयो । अरु कुरा मिल्न छाडेपछि दुबैतिरका युवा कार्यकर्ता बागबाजरतिर गफिन थाल्दा बादलसँग पोहोर वैद्य समुह छाडी फर्किएका एकजनाले फ्याटटै भने, उमा भुजेललार्य पनि त्यस्तै, गर्नुपर्ने ।
तत्कालीन एमाले कार्यकर्ताले सोधे, किन ? उनीहरुको झगडा रहेछ, करोडको । पार्टी फुटेपछि पनि मोहन बैद्यलाई प्रचण्डले खुसुखुसु खर्च दिने रहेछन् ।
शायद, हिजोआज पनि उनले प्रचण्डबाट पैसा बुझेको हुनुपर्ने ती कार्याकर्ताको अनुमान थियो । तर, प्रकाण्ड गिरफ्तारी प्रकरणपछि प्रचण्डसँग विप्लवहरु सशंकित छन्, कुराकानी हुन छाडेका छन् ।
नत्र, तीन बर्षअघि प्रचण्डले वैद्यलाई रुपैयाँ दिँदा विप्वलालार्ई बोलाएर जानकारी दिएका थिए । तर, बादल बोलाईएनन् । वैद्यकहाँ पैसा पुगेपछि बल्ल बादलले चाल पाए । विप्वलले त्यसको आधा रकम आफुमार्फत
खर्च हुनुपर्ने माग गरे ।
बादले बैद्यलाई नदिने भन्दै थिए, त्यहि दिनबाट हो, बादल र विप्वलवबीच चर्काचर्की परेको । पछि वैद्यले आफुसँग एक रुपैयाँ पनि नराखी आधा बादल र आधा विप्वलवलाई दिए ।
विप्लव पैसा पाउनसाथ चीन गए । किन गए ? कसले बोलाएर गए ? यी केहि कुरा पार्टीमा भनेका थिएनन् । वैद्यले साद्यदा पनि साथीले बोलाएको मात्रै भने ।, आज प्रकाशित जन आस्था साप्ताहिकमा यो खबर छ ।
२०७५, १७ आश्विन, 02:05:24 AM
विप्लव आतंकवादी, सीके राउत विखण्डनकारी :- सुरक्षा परिषद
बैद्यले विप्लवसँग एकता नगर्ने, क्रान्ति पनि नछाड्ने
लिम्बूवान् परिषद् वार्तामा बस्ने, विप्लव समुह के गर्छ ?